फेसबुक इन्फोर्स र अरू जस्ता ठूला वैकल्पिक समाचार साइटहरू रोकिएको छ: यस साइटलाई पनि सूचित गरिएको थियो: मार्टिन भिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	3 मई 2019 मा	• 16 टिप्पणिहरु
फेसबुक आज रोकिएको छ धेरै ठूलो विकल्प समाचार साइटहरू को रूप मा Infowars, Farrakhan र अन्य। यो पनि एक कदम अगाडी जान्छ: यदि तपाइँ आफ्नो समयरेखामा ती साइटहरू लेख्नु हुन्छ भने, तपाइँले पनि एक प्रतिबन्ध पाउनेछ। साथै मार्टिन व्रिजल्याण्डको पृष्ठमा धेरै दिनको लागि एक सन्देश भएको छ जुन सबै प्रकारका सेटिङहरू मईमा2द्वारा गरिनु पर्छ। चलचित्रहरूमा यो लेख र (र यसको र त्यस प्रतिक्रियाहरूमा) मैले देखेको छु कि म फेसबुकबाट आवश्यक डेटा कसरी प्रदान गर्ने प्रयास गर्दछु (यद्यपि म वास्तवमा ती आवश्यकताहरू बेवास्ता गर्दछु), तर नामको सेटिङ बटन मात्र काम गर्दैन।
म धेरै वर्षको लागि भनिरहेको छु कि इन्फोर्सहरू जस्तै वेबसाइट नियन्त्रणमा रहेका छन्। त्यस्ता साइटहरू वास्तवमा सुरू भएको छ र महत्त्वपूर्ण विचारकहरूको बढ्दो समूहमा कब्जा गर्न प्रयोग गरिन्छ। पहिला तपाईं तिनीहरूलाई स्पष्ट स्ट्याम्पमा छ्याउन र दायाँ-ह्यान्ड कुनामा राख्न सक्षम हुनुपर्दछ। तथ्य यह है कि फेसबुक अब खुले तौर पर इस कठोर सेंसरशिप का अभ्यास और पेज प्रतिबंधित करता है इसका मतलब है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत एक तथ्य है। ती वेबसाइटहरूले अब ब्लाउन्ड गर्न सक्दछ र एक नियन्त्रणमा रहेको खेलको आलोचना गर्न सक्छ। दिन 1 बाट, शासकहरूले इन्टरनेटमा सम्पूर्ण बल क्षेत्र नियन्त्रण गर्छन्।
राजनीति र मिडियाले अन्तर्वार्ताको वरिपरि घटेको समाजलाई वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्षम बनाउँछ। तपाईं वास्तवमा एक निश्चित तरिकाको सोच र लिङ्क तिर एक नागरिक प्रवृत्तिमा हरेक नागरिकलाई पछाडि सक्षम हुन चाहानुहुन्छ। तपाईंले धारणालाई मार्गदर्शन गर्न मिडिया प्रयोग गर्नुहुन्छ र मानिसहरूलाई यो स्वाद र रंगहरूको प्यालेट प्रस्ताव गर्नुहोस्। यदि तपाईं सबैलाई समझाउन सक्षम हुनुहुन्छ कि यो एक निश्चित स्वाद वा रङसँग राम्रो हुन, तपाइँ मान्छेलाई मतदान गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईं ठीक तरिकाले मापन गर्नुहुन्छ तपाईको धारणा व्यवस्थापनले कसरी प्रभाव पारेको छ र मानिसहरू एक, बी वा सी पछि भेडा गर्न कसरी सफल हुन सक्दछन्। यो यसको बारे सबै हो जीवनको दर्शनमा पकड राख्नुहोस्। त्यो कसरी भनिन्छ: धारणा व्यवस्थापन। यद्यपि, तपाईंले सम्पूर्ण प्यालेट प्रस्ताव गर्नु पर्छ। निस्सन्देह तपाईं हेर्न चाहानुहुन्छ कि तपाईं सबै र एकै नै विचार सबैलाई समझाउन सक्नुहुन्छ, तर मानव मनोचिकित्सा फरक काम गर्दछ। एक मर्सिडीज, अन्य वोल्क्सवैगन वा बीएमडब्ल्यू ड्राइभिङ मनपर्छ। तपाईं पनि ती सबै फरक विचारहरू खिच्न सक्षम हुनु र अधिमानतः तिनीहरूलाई पठाउन सक्षम हुन चाहानुहुन्छ। जो विश्व स्टेजमा तारहरू खिचाउँछन् (फ्रीमसोनिक जस्ता सञ्जालका सञ्जालहरू, सबै प्रकारका विश्वविद्यालयहरू जुन यस समूहका लागि प्रशिक्षण संस्थानहरू सिर्जना गर्छन्) र राजनैतिक र धार्मिक संगठनहरू हुन्छन्, कसैलाई भन्दा राम्रो थाहा छ कि तपाईं सधैँ विरोधमा फ्यान गर्नुहोस्। तपाईंलाई पकड गर्नुपर्छ।
मानिसका विचारहरू रङ्ग र स्वादको रूपमा विशेषता हुन सक्छ। तपाईं मानिसहरूलाई जित्न सकेसम्म कोटिहरूमा राख्न चाहानुहुन्छ, ताकि तपाइँ त्यस समूहमा मिडिया द्वारा निर्मित निश्चित व्यवहार वा व्यवहार लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। "तपाईं सही हुनुहुन्छ, किनकि तपाईसँग त्यो र त्यो राय छ" तपाईं सुधारिएको, सुधारिएको वा क्याथोलिकको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, आजकल राजनीतिले स्वाद वितरणको भूमिका खेल्छ र यो छवि हो कि एंकर छ। राजनीति नयाँ चर्च हो। र तपाईंसँग एक निश्चित चर्चसँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ, अन्यथा तपाईंले गन्ती गर्नुहुन्न। तपाईं जस्तै अज्याक्स, पीएसवी, वा फेइनेनोर्डको लागि हुनुपर्दछ। त्यसैले तपाईं बायाँ, दायाँ, उदारवादी, सामाजिक लोकतान्त्रिक र यतिमा हुनुहुन्छ। यो तपाइँ कसरी 'ब्रान्डहरू' लाई लिंक गर्न सक्नुहुन्छ: चिन्ह लगाउनुहोस्। समाजमा हरेक विचारको लागि सुरक्षा नेट छ। सबै इन्टरनेट ट्राफिक, अनलाईन वार्तालापको ठूलो डाटा विश्लेषणहरू, ई-मेलहरू, टेलिभिजन कुराकानीहरू, सोशल मिडिया गतिविधिहरू र स्थान डेटाको सबै अन्य इनपुट (तपाइँ के निर्भर हुनुहुन्छ र तपाईं के सँग व्यवहार गर्नुहुन्छ) को को रायमा स्पष्ट सेवा प्रदान गर्दछ पालन ​​गर्दछ। निस्सन्देह कि औपचारिक रूपमा नगर्ने र अवैध रूपमा सक्षम हुनका लागि तपाईं जस्तै पान्जाहरू छन् जर्ज वान होट्स त्यसपछि त्यसपछि त्यो कथालाई नियन्त्रण गर्ने तरिकामा डुब्न अनुमति दिइयो।
सुरक्षा नेट रणनीतिकर्ताहरूको काम हो तपाईंलाई महसुस गर्नुहोस् कि यो तपाईंको लागि व्यवस्थित हुनेछ र तपाईंलाई माछा माछा नेटमा पकड। तथापि, शक्तिको एक मोहराले सत्ताको कुर्सी खुट्टामा केहि खण्डहरू गर्न अनुमति दिनेछ, तर तिनीहरू पूर्णतया हराएनन्। फेसबुक सेंसरशिप र सम्भव अचम्मको बारेमा हालैको अचम्मको कुरा हो जुन यसको साथ उठ्न सक्छ को लागी उपेक्षित नियन्त्रण विरोधी च्यानलहरु को वेबसाइटहरु मार्फत कब्जा गर्न सकिन्छ। यो संधै इरादा हो कि सडक मा साधारण मान्छे निष्क्रिय राखिएको छ। उहाँले एक कप कफी धकेल्छ र मान्नुहुन्छ कि अरूले यसको लागि प्रबन्ध गर्ने। Infowars 'एलेक्स जोन्स वा रबर्ट जेन्सन तिम्रो लागि बस राम्रो हुनेछ र यसैले सबैजना ठाडो ठाउँमा रहन्छ र केहि गर्दैन।
मिडिया र वैकल्पिक मिडियाले अनुयायीहरूको धारणालाई मार्गदर्शन गर्न र त्यसबाट निम्न कार्य गर्ने च्यानललाई पनि लक्ष्य राख्दछ। प्रायजसो, तपाईं पहेंलो भित्ता जस्ता नियन्त्रण नियन्त्रणमा भाग लिन उत्साहित हुनुपर्छ। त्यो धेरै खुसी छन् को लागि। त्यसपछि तिनीहरू उनीहरूको निराशालाई एक च्यानलमा घुमाउन सक्छन्। बीचमा, कुलवादी राज्यको एजेन्डा पूर्ण गतिमा दौडिरहेको छ।
तपाईले निश्चय गर्न सक्नुहुनेछ कि फेसबुकले सोशल मिडिया साइट सेटअप गर्न धेरै उत्कृष्ट थियो जुन स्मार्ट स्मार्ट नामको एक स्मार्ट सफलता हो। यो समय तपाईं ती 'अमेरिकन ड्रीम' कथाहरू पंच गर्न समय हो। यस्तो संस्थाहरू र अगाडि पुरुषहरूलाई शक्तिमा ती व्यक्तिहरूद्वारा सुरु गरिएको छ। दिन 1 फेसबुकलाई जासूस उपकरणको रूपमा स्थापित गरिएको छ, धारणालाई प्रभाव पार्ने उपकरण र पोलिटल नियन्त्रण प्रणालीमा पोर्टल। यो एक कदम-दर-योजना योजना हो र अन्तिम गन्तव्यमा अझ तीव्र रूपमा स्पष्ट हुँदैछ जसले अझै पनि केही हल्ला जागृत आत्मा छ।
क्यामेरामा कुन फेसबुकले क्याम्ब्रिज एनालिटिक्ससँग यसको डाटा साझा गर्यो मात्र छाप्नको लागि एक आवरण-अप थियो कि यो एक अफ अफ असाधारण घटना थियो। त्यसोभए फेसबुकले तपाईलाई अझ अधिक गोपनीयता उल्लङ्घनका लागि साइन इन गर्न अनुमति दिन्छ, किनभने अन्यथा तपाईंले अब केही सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। र मानिसहरू मा गहिरो उत्तेजित सचेतना को ध्यान संक्षेप को प्रक्षेपण कैम्ब्रिज एनालिटिक्स नाटक को माध्यम ले थोडा विचलित भएको थियो, जस्तै कि हवाई जहाज को उतारने वाला फ्लोरिङ फ्लाईज को ताप को लागि ताप मांगने वाला मिसाइल छोडने को लागि। फेसबुक मात्र एक शरीर हो र समूहको लागि जसले समग्रतावादी राज्यको अवस्थालाई संसारमा डोऱ्याउँछ। सामाजिक बहिष्कार व्यक्तिहरूलाई फेसबुकबाट प्रतिबन्धित समूहमा लिङ्क गरेर यसरी मात्र एक निश्चित समूहलाई स्पष्ट रूप देखि उत्तेजित गर्ने रणनीति हो।
त्यस्ता व्यक्तिहरू महत्त्वपूर्ण छन् यसैले सधैं स्पष्ट रूपमा चिन्न सकिन्छ। "ओहो, तपाईं इन्फोवर्स, जेन्सेन वा फोरम वोर डेमोक्रेसीबाट एक हुनुहुन्छ। ओह, तपाईं फेसबुकमा प्रतिबन्धित व्यक्ति मध्ये एक हो।"यस तरिकामा, मानिसहरू नियन्त्रणमा लिएनन् जो पनि नियन्त्रित समूहसँग जोडिएको छ।
एक धेरै चिसो शतरंज खेल खेल्दैछ। यो केही होइन कि यो संसारका शासकहरूले सुपरकमप्टरहरूमा पहुँच गरेका छन् जसले सर्वश्रेष्ठ शतरंज खेलाडीलाई हराउन वा विश्वका खेलाडीहरू हराउन सक्छ। उनीहरु यो रणनीतिक ढंगले कसरी यस्ता तरिकाले खेलिरहेका छन् कि तिनीहरूले प्रत्येक व्यक्ति निष्क्रिय मोडमा राख्छन्, हर्षित हुन सक्छ र उनीहरूले स्ट्रिजलाई कसरी लागू गर्ने र उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने समूहलाई लिङ्क थाहा पाउँछन्। अन्ततः, कि नियन्त्रित समूहको सुरक्षा नेट जहाज यो केहि जानबूझाउने निर्मित डिफाइनमेन्टमा वा सामाजिक अशांति र आर्थिक अराजकतालाई जोडेर बिस्तारै हुनेछ। भित्र समावेश यो लेख (र धेरै अन्य) मैले व्याख्या गर्दछु कि मलाई खेल कसरी ठीक काम गर्दछ।
र तपाईं यसलाई हेर्नुहुन्छ, अर्को कफी कफीमा राख्नुहोस् र तपाईंको कंधेलाई खानुहोस् किनभने तपाईं यसको बारेमा केहि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंको जीवन जारी रहनेछ। मेरो विचारमा, त्यो सही रवैया छैन। यदि तपाईं आफ्नो खेल मैदानको वरिपरि एक जेल निर्माण भइरहेको छ र तपाईले बिल्डर्सहरू रोक्न केहि गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाई जिम्मेवार हुनुहुन्छ। तपाईं आफैलाई एक क्रांति सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। एक क्रांति जसले वास्तविक परिवर्तन ल्याउनेछ। पहेंलो भित्री वा सरकारको विरुद्ध ब्यानर र प्रदर्शनहरू मध्ये कुनै होइन। होइन, एक क्रांति जुन जीवनको फरक मनोवृत्ति संग सुरु हुन्छ र वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यो 'मा विश्वास को पुनरुत्थान संग शुरू हुन्छ'परिवर्तन माथिबाट आउँछ"to"परिवर्तन मलाई बाट आउछ"। वास्तविक क्रान्तिले तपाईंको आत्माको शक्तिशाली प्रभाव र तपाईंको (नतीजा) यस संसारमा कार्यमा विश्वास गरेको छ। यो 'तितली प्रभाव' लाई कल गर्नुहोस् वा यसलाई 'उज्ज्वल प्लेटमा ड्रप' भन्छ, शक्तिमा फरक फरक छ। हामी यसमा विश्वास गर्दैछौं हाम्रो इच्छाको प्रभाव हरायो। हामी बिर्सिएका छौं हामी वास्तवमा आत्मा स्तरमा छौं र हामी बिर्सिएका छौं कि प्रत्येक व्यक्तिले उनीहरूको वातावरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ। त्यो बलियो इच्छा निर्णयको साथ सुरु हुन्छ।
ठूलो परिवर्तन उपरोक्तबाट आउँदैन, न त व्यवस्थित (नियन्त्रित) प्रतिरोध, न त राजनीतिज्ञ वा विपक्षी दल वा नयाँ मिडिया स्रोतहरूबाट। ठूलो परिवर्तन तपाईं संग सुरु हुन्छ। त्यो तपाईबाट अब हुने हुने छनौटहरूको साथ सुरु हुन्छ। यो तपाईंको हृदय सुन्न सुरु हुन्छ; तिम्रो आत्माको ढोका। तपाईंको जीवनको जोस्टमा कसले छ? के तपाईं आफैलाई वा कि हुनुहुन्छ (डरको नियन्त्रण रेखा र निश्चितताको हानि) मार्फत तपाईंको बैंक, मालिक, राजनीतिक दल, तपाईंको क्यारियर वा जो पनि? तपाईं केवल विश्वास गर्न सक्नुहुन्न कि तपाईंको छनौटहरू संसारमा कुनै प्रभाव छैन, किनभने भाप लोमोमोटिव रेसिङ हो! तपाई किन सोच्नुहुन्छ कि मानिसहरु को जनता पाडल देखि कब्र देखि क्रमांकित गरदैछ र गति मा रहन र सिस्टम मा भाग ले रहे हो? यो तपाईंको आत्माबाट क्रांतिको लागि समय हो। र त्यो तपाईंको छनौटबाट सुरु हुन्छ। यो तपाईंको हृदय र तपाईंको अन्तस्करणमा सुन्न सुरु हुन्छ। तपाइँको टिभी बन्द गर्नुहोस्, सबै समाचार स्रोतहरू बन्द गर्नुहोस् र प्रोग्रामिङबाट आफैलाई जडान गर्ने प्रयास गर्नुहोस् जुन तपाइँ दैनिकमा बमोजिम गर्नुहुन्छ, ताकि तपाइँ आफ्नो भित्री आवाज फेरि सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यो भित्ता आवाज साँच्चै भाषणको झरना होइन जुन वास्तवमा तपाईंसँग कुरा गर्दछ। यो तपाईंको प्राण हो जसले तपाईंलाई शुद्ध र भ्रामक छनौट बनाउँछ; यसले तपाईंलाई देखाउँछ कि निश्चित कुराहरू स्पष्ट छन् र साहसी हुनु तपाईंलाई बलियो बनाउँछ। तपाईंको आत्माले तपाईंलाई देखाउँछ तपाईंको परिवर्तन प्रणाली र लिपिमा ठूलो प्रभावको।
यदि तपाईं निष्क्रिय रहनु भएको छ भने यस संसारमा परिवर्तनहरू आउँदैनन्। परिवर्तन आउँदैन भने तपाईंले प्रत्येक चार वर्षमा मतदान भर्न सक्नुहुनेछ र आशा गर्नुहुनेछ कि अर्को पवन शक्तिले तपाईंलाई यो समय मद्दत गर्नेछ। तपाईं कसरी विश्वास गर्नुभन्दा अन्धामा छ? त्यो वास्तवमा आलस्यताको रूप हो। परिवर्तन आउनेछ जब तपाईं आफैले कार्य गर्नुहुनेछ। कुनै विचारहरू, कुनै शब्दहरू, केवल कामहरू छैनन्। यसैले परिवर्तन गर्नुहोस् र सबै प्रणालीहरू जुन तपाईंले हेर्नु भएको हो कि समग्र प्रणाली वा त्यस प्रणालीको संरचनाको समर्थनको रूपमा। अब भाग लिनुहोस्। यसलाई फरक बनाउनुहोस्। तपाईं सजिलै संग आफैलाई सोच्न सक्नुहुन्छ, किनकी म पनि यो गर्छु र म7वर्ष अघि छोडेको सडकमा एक साधारण मानिसको भन्दा बढी केही छैन र कंक्रीट कार्य लिनुभयो। यो गर
क्या सिग्नलहरू छन् जुन तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ जुन जुलियन एन्जिन्ग विक्लिकिलेक्स पीएसओपी हो?
ट्याग: एलेक्स, प्रतिबन्ध, संवेदना, फेसबुक, फेसबुक पेज, विशेष, infowars, जोन्स, पृष्ठ, पृष्ठहरू, हटाइयो, हटाउँछ
3 मई 2019 मा 13: 52
Infowars, आदि को केहि विश्वसनीयता दिन को लागि, उनि ती साइटहरु को 'प्रतिबंध' हुनु पर्छ। यो सुनिश्चित गर्दछ कि जोन्स र सह 'स्थापना' को 'पीडितों' को रूप मा बेची जान सक्छ, जबकि Infowars, etc, purely controlled opposition। तर, उनीहरुसँगको सम्बन्धमा उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराईएको छ। सधैंको रूपमा, तिनीहरू हेनको अनन्त चिनोहरू हुन्।
कुनै पनि इनडोन छैन लेखे:
3 मई 2019 मा 14: 54
तपाईं चाहानुहुन्छ तपाई परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ, तर यदि तपाईं एक वरिपरि समाजमा समाप्त भएमा तपाई वरपर सबै भारी भित्री दिमाग भोग्नु भएको व्यक्ति हो भने तपाई परिवर्तन गर्नुहुन्न र यदि तपाई नियमित रूपमा एक प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाई दुर्व्यवहार र बेवकूफ प्रतिक्रियाहरू पाउनुहुनेछ।
र म पनि विश्वास गर्दछु कि यो पहिले नै ढिलो भएको छ, मान्छेसँग9/ 11 मा धेरै गल्तीहरूको अध्ययन गरेर जगेडा गर्ने मौका थियो। त्यसो भए यो2को लागि 12 थियो ...। हामी पहिले नै रातभरको समय वरिपरिका मान्छेहरू पाउनेछौँ र उनीहरूले के सोचेका छन् कि कम्तीमा ती डाक्टरहरूले समाचारको लागि एनओएस हेर्न र राम्रो समय, खराब समयका साथ भरपूर जीवन भरेर फुटबल नगर्ने !! तिनीहरूले वास्तवमा यसको बारे सबै कुरा जान्दछन् ... तर तिनीहरूले संसारको बारेमा पनीर खाएको छैन जसमा उनि बस्ने र मनोगोथ जसले संसारलाई डोऱ्याउँछन्।
म योजनामा ​​इलिनोमिन-होल्यान्ड छोड्ने योजना छ, पहिले युरोपेली युद्ध सुरु गर्नु अघि र हामी शान्तिपूर्ण धर्मको मान्छेले हेलिकप्टर हुनेछ, तर यो कहाँ सुरक्षित हुनेछ?
त्यहाँ संसारमा कुनै स्थान छैन जहाँ रोथलिल्डले मानिसलाई मात्र छोड्छ, मैले मेरो अन्तिम दिन आउँदैछु, युद्ध र दु: खबाट बचाउँछु र हामी ती सबै क्यान्सरहरूलाई दिनेछौं - हाम्रो वरपर बेवकूफ व्यक्तिहरूलाई सबैभन्दा अधिक, अभिजात वर्ग वा मेरा सँगी नागरिकहरू? हम्म ...
4 मई 2019 मा 07: 10
कुनै अचयनित छैन, तपाईंको लागि म फेरि 1 बाट मेरो प्रतिक्रिया पोस्ट गर्छु, कम से कम एक सुरुवात हो यदि सबै मान्छेले निम्न कार्य गर्दछन्, त्यसलाई सकेसम्म धेरै मानिसहरूलाई साझा गर्नुहोस्।
3 मई 2019 मा 15: 46
"र हामी ती सबैलाई दिनेछौं (...) हाम्रो वरिपरि बेवकूफ मान्छे, यसैले म सबैभन्दा अधिक, अभिजात वर्ग वा मेरा सँगी नागरिकलाई कसलाई घृणा गर्दछु? हम्म ... "
तपाईं राम्ररी प्रणाली कसरी परिमार्जन गर्नुहुन्छ भन्ने राम्रो प्रतिनिधित्व दिनुहोस्। एक पटक फेरि यो उत्प्रेरक भावना द्वारा ध्रुवीकरण सिर्जना गर्न सफल भएको छ।
मेरो लागि सबै भन्दा राम्रो काम गर्दछ प्रत्येक परिस्थिति मा आफै संग रहन को लागि र यसैले मेरो आसपास सबै पागलपन को प्रतिबिंबित। यदि एक व्यक्तिले यसको बाट पनि उदाहरण लिन्छ भने, त्यसपछि मैले निश्चित रूपमा परिवर्तन गर्न योगदान दिएँ।
3 मई 2019 मा 16: 47
के तपाईं त्यो ठोस उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ? तपाईं कसरी जान्नुहुन्छ कि अर्को व्यक्तिले तपाईंलाई उदाहरणको रूपमा लिइसकेको छ? त्यो परिवर्तन कति ठूलो थियो, कुन कुरा कंक्रीट सर्तमा परिवर्तन भयो।
म अब नयाँ युग को महसूस गर्दछ कि म केहि केहि नहीं गरेर सकते।
4 मई 2019 मा 18: 27
त्यो कहिले काँही निराशाजनक हुन सक्छ, म कहिलेकाहीँ अरू मानिसहरूको लागि के गर्दैन भनेर थाहा छैन। म भर्खरै मेरो जीवनलाई एक तरिकामा बाँच्न खोज्दैछु कि मलाई सहज लाग्छ। अरू मानिसलाई उपचार गर्ने तरिकामा व्यवहार गर्नुहोस्, मेरो साथ रहनुहोस् जब मेरो वरपर सबैजना पागल हुदैछ, घृणा गर्नुको सट्टा बुझ्नुहोस्।
दुर्भाग्यवश, सबै प्रकारका धर्म र प्रवृतिहरूले यस्ता तार्किक समस्याहरूको साथ हिंडेको छ। ईसाई धर्म, नयाँ युग, जीवनको सबै तार्किक विषयहरू विज्ञान सहित एक धर्मले घृणा गरेको छ।
यो प्राप्त मार्ने मार्टिन नियमित रूपमा यहाँ वर्णन गर्दछ। सबैलाई तुरुन्तै धकेल्न सकिन्छ, ध्रुवता सिर्जना गर्न सकिन्छ र अचानक म नयाँ युग हुँ।
मेरो महिनाको एक मित्र अनुसार फोरम वान डेमोक्रेसीको एक समर्थक म अन्तिम महिना हुँ। र यो दिउँसो एक सख्त धार्मिक क्याथोलिकसँग वार्तालापको क्रममा जो आररगेडोनबाट सबै ठाउँमा सिग्नलहरू देखे, म एक धर्मपन्थी हुनुहुन्थ्यो र म सधैं नरक आगोमा जलाइदिनेछु।
यदि म आफैसँग बस्न सक्दिन भने, मलाई लाग्छ कि म एक विशाल पहिचान संकट हुन जाँदैछु
सौभाग्य देखि मैले कहिलेकाँही केहि प्रतिक्रिया पाउँछु जसले मलाई पागल पार्दैन: https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/landelijke-peiling-vertrouwen-in-de-media-wat-laat-dat-zien/#comment-23048
3 मई 2019 मा 16: 39
हो, यो दु: ख छ, तर दासले कमान्डर आप्रवासी 'कुलीन' को आज्ञा र निषिद्ध महसुस गरेका छन्। दासहरू कुनै विचार गर्दैनन् कि उनीहरूको टाउकोमा भएका विचारहरू आफ्नै आफ्नै विचार होइनन् तर पूर्ण रूपमा साम्राज्यवादी प्रजातन्त्रको कुलीनको लागि स्पंजको रूपमा समावेश छन्। र साँच्चै यो दासहरू को लागी बनाए राख्ने र उनीहरूको हात र दाँतको साथ आफ्नो शत्रुका आप्रवासी 'मालिक' को रक्षा गर्ने दासहरू हुन्। टेलिभिजन मार्फत ब्रेनविशिंग, इन्टरनेटले आफ्नो काम पूरा गर्यो। साथै, दासहरूको धेरै कम आईक र
अहंकार, आत्मकथा, भय र अपराधको द्वारा आन्तरिक र हेनका गीला सपना सत्य भएको छ। दासहरू र दासहरूका मालिकहरू पनि यो महसुस गर्दैनन्। उनीहरूको दासहरू भन्छन्।
3 मई 2019 मा 19: 38
एडिड हामी यहाँ साइटमा दोहोरिन्छौं, यहाँ सम्म कि बर्नसेन्स र गोबिबल्सले खुसी मुहारको साथ डोनियल भेडा देखिरहेको थियो ... राम्रो तपाई के चाहानुहुन्छ यदि प्रणाली ठीक छ भने तपाईले दासहरूको स्वैच्छिक सहयोगको साथ मिलिमिटरलाई हेर्नु हुन्छ
उनीहरूले माछा मा सुन्दर छैन ... यो भनिएको छ कि तपाइँ दुई भेडाहरू भन्दा बढी भेडाहरू भन्दा बढ्न सक्दैनन् भने उनीहरूले मदुरामम in मा देखिनन्।
"कुनै पनि आशाहीन रूपमा कसैलाई भन्दा हानिकारक हुँदैनन् जसले झूटो विश्वास गर्छ भन्ने विश्वास गर्छ।"
4 मई 2019 मा 10: 20
पैसाले हामीलाई कहीं मा राखिएको ऊर्जालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यदि तपाईं केहिसँग असहमत हुनुहुन्छ भने, तपाईंले भुक्तानी रोक्नैपर्छ। यी चीजहरूसँग हामी रोक्न सक्छौं जुन समाचारहरू, ठूला ब्रान्डहरू खरिद गर्न र स्थानीय रूपमा खरीद गर्न वा खरीद गर्न आफैलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सक्नुहुन्छ। एक बंधक नबिर्सनुहोस् र सङ्कलन हो कि एक समूह संग सशक्त आवास खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्।
यो सत्य हो कि यदि हामी कर भुक्तानी रोक्न यो वास्तव मा एक प्रभाव हुनेछ। दुर्भाग्यवश, समूह धेरै सानो छ र एक वा दुई दिन लामो समय मा अर्थ बनाउँदैन।
हामीसँग अझैसम्म पुग्न लामो बाटो छ, तर कदमद्वारा कदम हामी मूलभूत कुरामा फर्किनेछौं। यो अग्रिमको बारेमा सोच्न राम्रो छ किनकि मलाई पक्का छ कि हामी अन्ततः मूल कुरामा जान पर्छ।
त्यो सडक जुन अहिलेको संसार ले लिया छ एक मृत अन्त्य हो र सधैंभरि नहीं जानेछ। यो राम्रो छ भने हामी पहिल्यै आफैलाई अघि बढ्न सक्दछौं, त्यसपछि झटका निकै कडा आउँदैन।
4 मई 2019 मा 12: 11
यो पैसा मात्र होइन। यो एक समूहको सदस्य हो जुन व्यवस्था भन्दा माथि रहेको छ र कानूनको अपवाद सधैं एकै ठाउँमा वा अर्कोमा बनाइन्छ। र यी व्यक्तिहरूले एकअर्काको हात आफ्नो टाउको माथि राखे भने यदि उनी कानून तोड्न वा पालन गर्दैनन् त्यसैले तपाईं तिनीहरूलाई छुटकारा पाउन सक्नुहुन्न। यसले उनीहरूले अरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा उठाउँछन्, सामान्य आबादी। त्यसोभए उनीहरूले हन्सलाई मुख्य पदका लागि सधैं प्राथमिकता दिन्छन् ताकि यस प्रणाली, शासनलाई भड्काउन सकिँदैन, दासहरूको व्यवहार र इमानदारीलाई पनि विचार गर। यसको अतिरिक्त, दैनिक जीवनमा ती साधारण आबादीबाट लुकेको छ कि तिनीहरू शत्रुहरूको आप्रवासी 'अभिजात वर्ग' को भाग हो भनेर धेरै चालाक हो।
4 मई 2019 मा 13: 53
यस समूहको वर्णन गर्न क्रिप्ट विवरणहरू बुझ्दछन्, उनीहरूले पनि फरक प्रयोग गर्छन्, विन्सेन्ट मास्क (राजनीतिक धाराहरू / विचारधाराहरू) भन्नका लागि उनीहरूको लक्ष्य प्राप्त गर्न ... वास्तवमा जेएफकेले 1961 को उनको प्रसिद्ध भाषणमा वर्णन गरेका छन्।
के तपाईं सम्झन जाँदै हुनुहुन्छ, हामी मुक्त छौं र यो औंस कम हुन सक्दैन?
राम्रो विरोधाभासहरू सतावट छन् .... ।
4 मई 2019 मा 20: 46
होइन, तर पैसा मुख्य रूपमा उपकरण हो जुन तिनीहरू सबै कुरा नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्छन्। यो कारण हो कि तिनीहरूले कसैलाई मारिरहेका छन् जो आफ्नै मुद्रा स्थापित गर्ने वा केन्द्रीय बैंकहरूबाट टाढा जान चाहन्छन्।
के तपाई सोच्नुहुन्छ कि सैनिकहरू / न्यायाधीशहरू / टिभि उत्पादकहरूले उनीहरूको लागि निःशुल्क काम गर्छन्?
दुर्भाग्यवश, तिनीहरू सामान्यतया नयाँ समाधानहरू जस्तै बिटकोइनको रूपमा रहेका छन् वा तिनीहरू पछि उनीहरूको डिजिटल नकली पैसा लिन सक्छन्।
4 मई 2019 मा 22: 32
यो मुख्य रूप देखि पैसा छैन तर धेरै कारकहरू, एक व्यापक प्यालेट जसले अन्त योग गर्दछ, यसैले एक संयुक्त विचारधारा, एक इन्डोट्रान्सन कार्यक्रम (elitist) विश्वविद्यालयहरूमार्फत सर्वोत्तम प्रयोज्य बेवकूफहरू, घटाउने प्रोग्रामहरू, पैसासँग भ्रष्ट गर्न, कच्चा माल जाँच / प्रविधि आदि।
यसैले अन्तिम चरणले टेक्नोलोजी माध्यमबाट अन्तिम प्रतिरोध तोक्न वा मानव शरीरलाई टाढाबाट घुमाउन वा हेरचाह गर्दछ।
4 मई 2019 मा 16: 15
"यो केहि छैन कि यस संसारका शासकहरूले सुपरकमप्टरहरूमा पहुँच गरेका छन जुन सबै भन्दा राम्रो शतरंज खेलाडीलाई हराउन वा विश्वका खेलाडीहरूलाई हराउन सक्छन्।" सुपरमाम्पटरहरू को पर्यवेक्षण गर्ने को हुन्? कसले सेंसरशिप प्रदान गर्दछ? यहाँका लागि पोस्ट गरिएका सबै समाचार वस्तुहरू हेर्नुहोस्:
4 मई 2019 मा 17: 02
यसका लागी एक अर्काको अनुहारमा अनुहार र अनुहारको अनुहारमा अनुहार र अनुहारको अनुहारमा अनुहारको अनुहारमा अनुहारको अनुहारमा अनुहारको अनुहारमा अनुहारको अनुहारमा अनुहारको अनुहारमा अनुहारको अनुहारको अनुहारमा अनुहारको अनुहारमा रगत बगिरहेको थियो। स्थगित र समापन को खत्म (Armageddon)। मेरो ज्ञान विश्व युद्ध III मा जाँदैछ, सबै हट स्पॉटहरू बेवास्ता गरिएका छन् र सबै समूहहरू जुन यो समुहको नियन्त्रणमा छन्। भाग I र II एक विफलता थिएन, तर इरादा भनेको हो कि अधिकांश मानिसहरू चाहँदैनन् ... दुर्भाग्यवश
मलाई आशा छ कि बहुमत समय मा उठ्छ र अब यो आफैले यो भनिन्छ कुलीन / चुनेको व्यक्ति को गाडी मा राखन अनुमति दिदैन ...।
यस सन्दर्भमा म पनि क्रिस्टोफर जोन बीजेर्किसको काम सिफारिस गर्न सक्दिनँ र निस्सन्देह हेनरी मक द्वारा धेरै लेखिएका लेख ... प्रसिद्ध ज्ञात प्रोटोकलहरू + रेड सिम्फनीको दुर्भाग्यवश यस ल्यूफेरियन योजनाको ब्लूप्रिन्ट बनाउँछ।
यो साक्षात्कार आदमको च्यानलमा एक कारणको लागि प्रतिबन्धित गरिएको छ, म भन्छु त्यहाँ डाउनलोड भन्नेछ कि त्यहाँ धेरै (अज्ञात) स्रोत सामग्री उल्लेख छ ..
4 मई 2019 मा 19: 13
त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहनु भएको छ। यसका बारेमा जानकारी दिईएको छ। तपाईले तपाईलाई थाहा पाउनु भएको छ भने तपाईले तपाईको बारेमा जानकारी गराउनुभएको छ। चक्रमा समाजवादी वा मार्क्सवादी राज्यको उपासनामा चक्र लगभग पूर्ण छ
यस सन्दर्भ मा चीन अझै पनि पुरा घटना अगाडी अगाडी छ र हामी नहीं, बिल्कुल, पछि stay पछि रहन सक्छ
« पल जुन्सेन सम्पादक-इन-प्रमुख टेलिग्राफ: तपाईंको नयाँ तानाशाहले डराएर टीबीएस विधान बनाउँछ?
ठूला वैकल्पिक मिडिया वेबसाइटहरू विरोधमा नियन्त्रणमा छन् »
कुल भ्रमण: 12.444.715